> Resource > Video > Sidee inay la midowdo Video iyo Audio
Mararka qaarkood aad rabto inaad ku biirto track maqal ah in video isha si ay u daboolaa audio ee file video ah leh qaar ka mid ah audio kale. Markaas Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ) yimaadaan ee ku anfacaya. Codsiga video tafatirka Tani waxay taageertaa qaabab video kala duwan sida MP4, FLV, AVI iyo MKV oo uu leeyahay awooda lagu dari / bedeli audio ee file video aan u baahan wax codec dheeraad ah. Xitaa waxaad qori karta aad voiceover u gaar ah iyo waxa ay sii kordhineysaa in ay video asalka. Article wuxuu bilaabay sidii ay u midowdo video iyo maqal ah oo leh qalab awood badan.
1 dejinta video iyo maqal ah ee files
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ayaa interface ah sahlay oo dareen leh. Waxaad kartaa jiita iyo hoos u files si saxaarad shayga ama guji "Import" button in shuban files badan audio ama video sida aad u baahan tahay. Tani qalab video tafatirka taageertaa kala duwan oo baaxad weyn oo qaabab, si aadan u muuqday wax dhibaato ah loading.
2 midowdo Video iyo Audio
Ka dib markii ay soo degida aad videos barnaamijka, jiidi ah video iyo files audio u Video iyo Audio Timeline siday u kala horreeyaan. Ka dib markii in, Dib u habaynta amarka iyo xitaa iyaga ku eegaan, kaliya haddii ay dhacdo aad rabto in aad hubiso in aad heshay faylasha midig. Haddii file maqal ah u baahan yahay tafatirka, double guji faylka si arbushin ilaa guddiga tafatirka audio. Halkan, waxaad dedejin kartaa / hoos xawaaraha, qabsato mugga, ka baxeysa dhigay / libdhi soo baxay, habayn garoonka of audio sida aad jeceshahay.
Talo: Haddii aad rabto in aad bedeli track asalka maqal ah oo file video ah, xaq waxa guji iyo dooran "Audio jari lahaayeen". Track audio ayaa soo muuqan doona Timeline Audio ah. Hit "Delete" ee keyboard inaad ka saartid ka dibna ku dar adiga kuu gaar ah file maqal ah si ay u meel u dhigma. Waxaad sidoo kale riixi kartaa "Record" (waa ku toolbar kor ku Timeline) inay soo qaadaan ay wada hadal Record Audio iyo aad ugu qortid cod u gaar ah.
3 dhoofinta faylka
Ka dib markii ay ku biirtay video iyo maqal ah faylasha, ku dhacay "Abuur" inay u dhoofiyaan aad video. Markaas dooran si loo badbaadiyo sida qaab file aad jeceshahay wax. Ka sokow in, waxa kale oo aad ku badbaadin karto iyo ciyaaro videos ku saabsan qalabka kala duwan sida iPhone, iPad, Zune, si toos ah video geliyaan si ay u YouTube, ama u gubato si DVD.
Sidaas darteed haddii aad u baahan tahay audio ah ama video midoobeen aad files warbaahinta, siin Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) isku day ah oo aan soo arko waxa ay qabato oo aad u.